Onye njem nleta India Visa | Visa Ndị njem nleta na ntanetị maka India
Onye njem nleta India Visa
Itinye akwụkwọ maka India eTourist Visa
Ndị njem na India nke ebumnuche ha bụ ịhụ anya / ntụrụndụ, izute ndị enyi na ndị ikwu ma ọ bụ mmemme Yoga dị mkpụmkpụ kwesịrị itinye akwụkwọ maka Visa Tourist India na usoro eletrọnịkị, nke a makwaara dị ka eTourist Visa maka India.
Visa ndị njem nlegharị anya maka India dị maka ndị ọbịa ahụ bu n'obi ịga India ihe na-erughị ụbọchị 180 n'otu oge.
Ndị njem na India ruru eru itinye akwụkwọ maka Indian Visa ntanetị Webụsaịtị a na-enweghị nleta ndị nnọchi anya gọọmentị Indian. Ebumnuche nke njem ahụ ga-abụrịrị azụmahịa na okike.
Visa ndị njem ndị India a anaghị achọ stampụ anụ ahụ na paspọtụ. A ga-enye ndị tinyere akwụkwọ maka Visa Ndị njem nleta Indian na webụsaịtị a otu PDF nke Indian Tourist Visa nke ga-eziga ya site na email. Inwere ike iji akwụkwọ Visa Indian a na-ahụ maka njem nlegharị anya ma ọ bụ akwụkwọ mbipụta tupu ịmalite ụgbọ elu / iji njem gaa India. Ederede Visa nke enyerela onye njem ahụ na kọmputa kọmputa ma ọ nweghị achọ akara anụ ahụ na paspọtụ ma ọ bụ ozi paspọtụ ọfịs ọfịs ndị India ọ bụla.
Kedụ ihe ga-eji Visa Ndị njem India?
Enwere ike iji Visa onye njem India ma ọ bụ eTourist Visa maka ebumnuche ndị a:
A na-enweta Visa a na ntanetị dịka eVisa India site na weebụsaịtị a. A na-agba ndị ọrụ ume itinye ntanetị maka ntanetị nke Visa nke India a kama ịga na Ọfịs Indian ma ọ bụ Indian High Commission maka ịdị mma, nchekwa na nchekwa.
Ogologo oge ole ka ị ga-anọ na India na eTourist Visa?
Enwere ọtụtụ nhọrọ nke Visa ndị njem nlegharị anya nke India dị maka ndị ọbịa n'ihe gbasara ogologo oge ugbu a. Ọ dị n'ime oge 3 dịka nke 2020:
Daybọchị 30: Kwadoro maka ụbọchị iri atọ site na ụbọchị ịbanye na India ma bụrụ uru maka ntinye ugboro abụọ.
Afọ 1: Kwadoro maka ụbọchị 365 site na ụbọchị nke mbipụta nke eTA ma bụrụ Visa dị ọtụtụ.
Afọ 5: Kwesiri ike maka afọ 5 site na ụbọchị nke mbipụta nke eTA ma bụrụ Visa ntinye ọtụtụ.
Iditykwụ ụgwọ nke 30 Day India Visa dị n'okpuru ụfọdụ ọgba aghara. I nwere ike gụọ maka ịkọwa Visa Tourist Day 30.
Mara: usedbọchị Visa a dị ụbọchị iri isii ka ọ na-abịaru India tupu afọ 60, mana ọ bụzi nke nwechara ya ka -akacha.
Kedụ ihe ndị achọrọ maka Visa Ndị njem nlegharị India?
Ndị njem nleta Visa chọrọ akwụkwọ ndị dị n'okpuru.
Mpempe akwụkwọ agba nwere agba nke mbụ (biographical) nke paspọtụ ha ugbu a.
Foto ụcha akwụkwọ ikike n'oge na-adịbeghị anya.
Ife akwụkwọ ikike ngafe nke ọnwa isii n’usoro mbata India.
Kedụ ohere na njiri mara nke ndị njem nlegharị anya India nke Visa?
Ihe ndị a bụ uru nke Visa Ndị njem nleta India:
Njem nleta ụbọchị 30 na-enye ohere ntinye Abụọ.
1 afọ na afọ 5 Visa na-elegharị anya na-enye ohere ntinye ọtụtụ.
Ndị ji ya nwere ike ịbanye India site na ọdụ ụgbọ elu 28 na ọdụ ụgbọ mmiri 5 ọ bụla. Lee ndepụta zuru ezu ebe a.
Ndị jidere Vista Ndị njem nlegharị anya India nwere ike ịpụ India site na ọpụpụ ọpụpụ ọpụpụ ọpụpụ ọpụpụ (ICP) ekwuputara ebe a. Lee ndepụta zuru ezu ebe a.
Mmachi nke Ndị njem nleta India Visa
Ihe mgbochi ndị a metụtara Visa Onye Nleta India:
30 Visa Onye njem nleta ụbọchị XNUMX bụ Visa dị ugboro abụọ.
1 Visa na Visa Onye Nlegharị Anya Afọ 5 dị irè maka naanị ụbọchị 180 nke ọnụnọ na-aga n'ihu na India.
a ụdị visa bu onye agbanweghi agbanwe, anaghi agbanwe ya, anaghi agbanwe ya.
Enwere ike ịgwa ndị rịọrọ ka ha nye akaebe nke ego zuru oke iji kwado onwe ha n’oge ọnụnọ ha n’India.
Achọghị ndị na-achọ akwụkwọ ka ha nweta ihe akaebe nke tiketi ụgbọ elu ma ọ bụ ntinye akwụkwọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na Visa Tourist India.
Ndị niile na-achọ akwụkwọ ha ga-enwerịrịrịrị paspọtụ Nkịtị, ụdị ndị ọzọ, ndị na-anabata akwụkwọ ikike nnọchi anya.
Visa Onye njem nleta nke India ezighi ezi maka nleta, ebe amachiri na mpaghara ndị agha.
Ọ bụrụ na paspọtụ gị na-emebi ihe na-erughị ọnwa 6 site na ụbọchị ibanye, mgbe ahụ, a ga-agwa gị ka ịmaliteghachi paspọtụ gị. Shouldkwesịrị inwe ọnwa 6 na paspọtụ gị.
Ọ bụ ezie na ịchọghị ịga leta ndị nnọchi anya ndị nnọchi anya India ma ọ bụ Indian High Commission maka stampụ ọ bụla nke Visa ndị njem nlegharị anya India, ị chọrọ. 2 ibe oghere na paspọtụ gị ka onye ọrụ mbata na ọpụpụ nwere ike tinye stampụ maka ọpụpụ na ọdụ ụgbọ elu.
Cannotgaghị enwe ike iji ụkwụ gaa India, a na-ahapụ gị ka ikuku na Cruise banye na Visa Onye njem nlegharị India.
Kedu otu esi akwụ forgwọ maka Visa Onye njem nlegharị anya India (eTourist Indian Visa)?
Ndị njem nwere ike ịme payment maka Visa Onye njem nleta India ha site na iji ndenye, Debit Kaadị, kaadị kredit ma ọ bụ akaụntụ PayPal.
Ihe mmachibido iwu maka Visa Ndị njem nleta India bụ:
Paspọtụ na-arụ ọrụ maka ọnwa 6 site na ụbọchị mbata India.
NJ Email arụ ọrụ.
Inwe Debit Kaadị ma ọ bụ Kaadị Ebe E Si Nweta ma ọ bụ Akaụntụ Paypal maka ịkwụ ụgwọ echere n'ịntanetị na weebụsaịtị a.
Biko tinye maka Visa Ndị njem nleta India 4-7 ruo ụbọchị asaa tupu ụgbọ elu gị.
Ide maka Visa Onye Nlegharị Anya